Sidee PPC u wanaajinaysaa Suuq geynta | Martech Zone
Sidee PPC u kobcisaa Suuq geynta
Talaado, Nofeembar 19, 2013 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Jenn Lisak Golding
Mid ka mid ah wada hadalada waa weyn ee socda maanta waa sida lacagtaada loogu qoondeeyo dadaalkaaga suuq geynta. Suuqleyda, celcelis ahaan, waxay adeegsanayaan in ka badan 13 xeelado kala duwan xeeladdooda si ay u soo jiitaan hoggaan cusub (xigasho: Machadka Suuq-geynta Macluumaadka), oo ay ku jiraan sawir-qaadista, qorista, ololeyaasha emaylka, fiidiyowyada, iwm. Haddaba, sidee baan ku ogaan karnaa halka aan ku bixinayo iyo inta aan ku bixineyno?
Istaraatiijiyadda suuq-geynta ee soo-galaysa ayaa u muuqata mid ka duwan ganacsi kasta iyo warshad kasta. Miisaaniyaduhu sidoo kale way kala duwan yihiin. Laakiin qaybta muhiimka ah ee istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah ayaa adeegsanaysa ilaha la heli karo sida ugu macquulsan ee suurtagalka ah si loo soo saaro hagitaanno tayo leh Hal xeeladood oo xaqiiqdii muujinaya natiijooyinka ayaa ah mushaharka gujiya (PPC), waxaanan kugula talinayaa in lagu daro xeeladdan lacag bixinta maalinba maalinta ka dambaysa.
Inta badan macaamiishayda, mushaharkiiba hal olole ayaa loo baahan yahay wayna shaqeynayaan. Sababta Sababtoo ah waxaan la shaqeyneynaa kuwayaga Wada-hawlgalayaasha PPC, EverEffect, iyo macaamiisheena:
ku soo dhawow isku-darka ereyada muhiimka ah (dabiici ah oo la bixiyo) ololayaasha PPC
Waqti ku qaad sidii loo ogaan lahaa sida loo dhimo qiimahooda halkii iibsi (CPA)
u qoondee miisaaniyad ololayaasha PPC bil kasta
Si kale haddii loo dhigo, PPC way shaqaysaa, laakiin waxay qaadataa waqti in si dhab ah loo muujiyo natiijooyinka, sida tab kasta oo kale oo suuq geyn guul leh.
Qayb ka mid ah geeddi-socodkan ayaa lagu ogaanayaa ereyada muhiimka ah ee u shaqeynaya tartamayaasha iyo faham wanaagsan oo ku saabsan muuqaalka tartanka. Waxaan la shaqeynay Ispionage, wax weyn raadinta qalabka suuq-geynta, si loo abuuro macluumaad ku saabsan sida ololeyaasha PPC ay kor ugu qaadi karaan istaraatiijiyadaada suuq geynta gudaha. Intii aan jidka ku sii jirnay, waxaan ka helnay stats aad u wanaagsan oo ku saabsan sababta PPC ay ugu shaqeyneyso qof walba min Dukaamada Hooyo & Dadweyne ilaa shirkado waaweyn (iyo sababta Ispionage ay u fududeyneyso ololahaas).
Tags: istaraatiijiyada suuq geyntaistaraatijiyad marketinglacag ku bixi olole kastaololayaasha ppcSuuq Goobid
21 Xeerar oo loogu talagalay Istaraatijiyadaha Warbaahinta Bulshada ee wax ku oolka ah
Mar 9, 2014 at 11: 24 PM
RDM waxay sameysaa xisaab xirka Adwords PPC lacag la aan, kaliya ka wac 256-398-3835
Mar 20, 2014 at 6: 16 PM
Waxaan la hadlay shirkado badan oo PPC ah, laakiin waxa ugu muhiimsan ee aad dhab ahaantii ku sameyn karto ololahaaga suuqgeynta ayaa ah deg deg deg deg deg ah. Shirkadaha badankood waxay kaa iibiyaan 1 shey oo kaliya sida naqshadeynta websaydhka, ama kaliya Google Adwords, ama kaliya popups, ama kaliya dib-u-habeynta iwm. Dakhliga ganacsigeygu wuxuu kordhay in ka badan 1% labo bilood gudahood markii aan soo xushay hay'ad wanaagsan oo wax ka qabatay wax ka badan PPC oo keliya, laakiin sidoo kale boggeyga degitaankeyga, dib-u-habeynta, xayeysiisyada banner, iwm. Xaqiiqdii, waxaan hayaa lambarka taleefanka ee Simon halkan, waad la hadli kartaa sidoo kale. Kaliya isaga ka soo wac 60-325-446.